Ubethwe ngebhotile kuba eyi ‘mofi’ | News24
Ubethwe ngebhotile kuba eyi ‘mofi’
U-Bulelani Majeke uthungiwe emva kokubethwa ngomnye umfana kuba esithi uyimofi. umfanekiso: UNATHI OBOSE
Lukhubeke luyinyama usapho lakwaMajeke kwingingqi yakoo 34, eHarare, kwaye lufuna umthetho udlale indima yawo emva kokuba unyana wabo ehlaselwe ngobusuku bangeCawe umhla wesihlanu kweyoMqungu.
Ngokwengxelo uBulelani Majeke (ominyaka ingama 35) kutyholwa ngelithi ubethwe ngenxa yokuba engumntu othandana nabantu abasisini sinye.
Le ndedeba, neyaziwa njengo KC, ishiyeke ineenkenkebula zamanxeba amabini, entloko kunye nasesidleleni.
Kudliwano-ndlebe ne City Vision uthe wayehamba neetshomi zakhe besuka kwenye indawo yentselo besiya kwenye ngethuba ekhwazwa ngomnye umfana embiza ngokuba uyi “mofi”.
“Lo mfana undibethileyo wayeme nomnye bencokola ngelixesha sizayo. Sithe xa sigqitha netshomi zam wakhwaza wandibiza ngemofi. Ndiye ndajika ndaya kuye ndambuza ukuba ngubani imofi? Uphendule ngelithi akathethi nam uncokola netshomi yakhe. Ndambuza ukuba kutheni esitsho xa kugqitha mna ngoba lo mntu ame naye akayomofi,” uthethe watsho.
U-Majeke utyhole ngelithi lo mfana umhlasele ngebhotile yotywala ngethuba besonyukelana. Ukwagxeke umhlobo walo mfana wamhlaselayo ngokubashiya ngethuba besonyukelana. “Andiyazi ukuba wayengenwe yintoni okanye wayenxilile,” utshilo uMajeke.
Waleke ngelithi uyiqhelile into yokuthukwa ngabantu ngenxa yesini sakhe. Uthe bengabantu abathandana nabantu abasini sinye ubomi babo busesichengeni nanjengoko bengamkeleki kwiindawo abahlala kuzo.
Othethela usapho nokwangudade boMajeke uNqabisa Qonongo uthe belusapho bothukile ngoba bebengayilindelanga le nto yehlele umntakwabo.
“Sisafuna ukuyazi ukuba yintoni unobangela wokuba uBulelani abethwe? Apho ingumnqa khona siyamazi lo mntwana ubethe uBulelani sazi nabazali bakhe. Ayingomntwana ondlongondlo, uzithulele, qha ukuba wayengenwe yintoni ngelaxesha wayembetha nathi asiyazi kwaye yile sifuna ukuyazi,” utshilo ecaphuka.
U-Qonongo utyhole umsolwa ngokusebenzisa igama elinentiyo komnye umntu.
“Kutheni ezobiza igama le ‘mofi’ xa kugqitha uBulelani abe engathethi namofi. Ngoba oyena mntu owaziwa ngobumofi yayinguBulelani,” ubuze watsho uQonongo.
Waleke ngelithi inkangeleko kaBulelani ayisayi kuphinde ifane nanje ngakuqala ngenxa yamanxeba asebusweni bakhe.
Ongumseki wombutho wabantu abathandanayo nabasini sinye, iFree Gender, eKhayelitsha uFuneka Soldaat uchaze esi sehlo njengesimanyukunyenzi nesihambisa umzimba. Uthe sifuna uthathelwa ingqalelo. Uhambise wathi bengamalungu emibutho yabantu abathandanayo nabasini sinye bazakumxhasa uMajeke nkqu nasezinkundleni zamatyala.
“NgoLwesibini (umhla wesi 6 kweYomqungu) besinentlanganiso namapolisa aseHarare sihlalele lo mcimbi sikwafuna nokuqonda ukuba kumaxa bendawoni na malunga nophando lelityala. Sizakulilandelelela neli ityala ukuqinisekisa ukuba umrhanelwa uyabanjwa,” utshilo Soldaat.
Isithethi samapolisa kwiphondo uAndre Traut usingqinile esi siganeko watsho esithi indoda engumrhanelwa ibanjiwe.